Halkay Iska Shabahan Wilson iyo Farmaajo? | RUUG-CADDAA
Posted by Ruugcadaa on June 24th, 2019
Madaxweynihii hore ee Maraykanka Woodrow Wilson ayaa kolkii uu rabay in dib loo doorto sannadkii 1916-kii waxa uu olole ka dhigtay “” Dagaal ayaan idinka ilaalin doonaa in aad gashaan”. Dadwaynaha Maraykan oo u riyaaqsanaa in colaad la iska mooso ayaa u codeeyey, waana uu guulaystay.
Muddo kooban kaddib oo ku beegan 1917-kii, wasaaraddii arrimaha dibadda ee Jarmalka waxa ay farriin caan noqotay u soo dirtay dalka Maksiko. Waxaa loo yaqiinnay Zimmermann Telegram. Waa farriin diblamaasiyaddeed oo Jarmalku ku dhiirigelinayey in Maksiko qabsato gobollada Taxes, New Mexico iyo Arizona ee dalka Maraykanka.
Waxaa farriintii gacanta u gashay Sirdoonka Ingiriiska, kaddibna fashiliyey. Kolkii warkaa dhiillada leh uu ogaaday Woodrow, waxa uu kala doortay in qayb dalkiisa ka mid ahi dowlado cadow ah u gacan-galaan iyo in uu dib uga laabto oo beddelo erayadii uu tartanka doorashada ku galay, dadkiisana ku qanciyo dagaalka Maraykanku galayo. Waxaa uu soo saaray erayo dhiirigellinaya shacabka Maraykanka oo uu leeyahay “”Dunida ayaan nabad ka dhigaynaa, waxaana badbaadineynaa Dimuqraadiyadda”. Dadwaynaha reer Maraykan ma oran waa na khiyaantay ee waxay la qaateen go’aankii kharaaraa!
Kolkii Farmaajo xukunka qabtay 2017-kii, waxa uu ololaha ku galay ” Nabad iyo Nolol”. Sidoo kale waxa uu ballanqaaday in uu noqon doonno nabaddoon Soomaaliyeed. Waxyar uun markii uu Xafiiska joogay, waxaa la qabqabtay lacago lagu carqaladeynnayo siyaasadda iyo xasilloonida Soomaaliya oo ka yimid Imaaraatka, dalka dariska ah ee Kenya ayaa bilaabay dedaal dheeraad ah oo uu rabo in uu ku boobo qayb ka mid ah dhul-baddeed hodan ku ah kheyraadka dabiiciga ah, waxaana la adeegsanayey mar walba siyaasiyiin xilal ka haysa gobollada iyo kuwa mucaarad ah oo Muqdisho jooga. Farmaajo iyo erayadiisii Nabad iyo Nolol waxay noqdeen kuwa ay adag tahay in ay rumoobaan illaa laga takhaluso siyaasaddaha shisheeyaha iyo kuwa u adeegaya, waana sababta illaa maanta loolanku uga taagan yahey maamul Gobolleedyada.
Madaxweyne Farmaajo, dhowr fagaare oo uu ka hadlay waxa uu u muuqday nin u gooddinaya shisheeye damaaciyey kheyraadka dabiiciga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo mid quus ka jooga siyaasiyiin mucaarad. Sidoo kale Wasaaradda warfaafinta ayaa soo saartay warqad loogu hanjabayo siyaasiyiin lagu tuhmayo in ay shisheeye shaqaale u yihiin !
Waxa aynu joognaa meel isgoys ah oo ay tahay in shacabku garab istaago dowladnimada, sidii shacabka Maraykanku u garab istaageen dowladdooda xilligii adkaa!
W/Q Ali Ahmed Ali
« Maxamed Bin Salmaan walaashii oo lagu maxkamadaynayo Faransiiska
Ma jiraan cuntooyin sare u qaadi karo howsha gogosha? »